Kedu ka teknụzụ dijitalụ si emetụta ihe okike | Martech Zone
Otu n'ime isiokwu m na-anụ banyere ọganihu na teknụzụ bụ na ọ ga-etinye ọrụ n'ihe egwu. Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịbụ eziokwu n'ime ụlọ ọrụ ndị ọzọ, enwere m obi abụọ na ọ ga-enwe mmetụta ahụ n'ime ahịa. Ndị na-ere ahịa na-ejupụta ugbu a ka ọnụ ọgụgụ nke ndị na-ajụ ase na ọwa na-aga n'ihu na-abawanye ebe ahịa ahịa na-adịgide adịgide. Teknụzụ na-enye ohere iji megharịa ugboro ugboro ma ọ bụ ọrụ aka, na-enye ndị na-ere ahịa oge ka ukwuu iji rụọ ọrụ na ihe okike.
Ogologo oge agafeela mgbe ndị ahịa na ndị mgbasa ozi jiri oge ha na-emepe nanị nhọrọ ole na ole ịhọrọ ọwa ọdịnala. Digital agbanweela ihe niile gbasara okike, site na otu esi eme ya ka esi kesaa ya. Olee otú ihe sirila gbanwee? Kedu mgbanwe nke nwere mmetụta kasịnụ? Ndi dijitalụ gburu kpakpando okike? Iji chọpụta, lelee MDG's infographic, Kedu Dijitalụ Agbanwewo Ebe Okike.
Ihe omuma ihe a na ekwu okwu banyere nsogbu na ohere ndi gbara gburugburu okike. Mgbasa ozi MDG jikọtara infographic a nke na-akọwa otu okike si agbanwe ihe na ọganihu na teknụzụ. Ha depụtara mgbanwe dị iche iche ise:
Ihe okike na-emepe ọtụtụ ọtụtụ usoro maka ọtụtụ nyiwe ndị ọzọ - Mgbanwe kasịnụ nke dijitalụ na ihe okike wetara bụ na o meela ka ọnụọgụ nke ụdị nyiwe dị mkpa itinye aka na ọnụọgụ ụdị ọdịnaya ha chọrọ ịzụlite.
Nhazi na Mmemme Na-akwọ Ọbụna Ọchịchọ Ndị Ọzọ Maka Okike - Isi ihe ọzọ dị na dijitalụ bụ na o meela ka ọ ghara ịba uru iji lelee ndị na-ege ntị anya, na ọbụlagodi ndị mmadụ, na-ewepụta ihe okike.
Data na Ngwaọrụ Ọgbanwe Agbanwe Agbanwe Ọdịdị nke Okike - Dijitalụ agbanwebeghị naanị otu esi ekesasị iberibe, kamakwa otu esi eme ya. Na akụkụ, nke a ewerewo ụdị ngwaọrụ ọhụrụ, dịka ngwaike na ngwanrọ, maka imepụta ihe.
Ihe okike amalitela ịdabere na nke na ngwa ngwa na AI - Kedu otu ndị okike si nwee ike ịzụlite ọtụtụ mpempe akwụkwọ yana ịnwekwu mmekọrịta na ntinye na-enweghị nnukwu mmefu ego? Akụkụ buru ibu, na akụkụ ọzọ nke mgbanwe nke dijitalụ, bụ akpaaka.
Democratization nke okike kere ihe onyinye dị mkpa karịa mgbe ọ bụla - A isi uzo dijitalụ agbanweela ihe bụ na ọ democratized ya; na smartphones na mgbasa ozi mgbasa ozi ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla nwere ike ịkekọrịta ihe ọ bụla n'ịntanetị. Nke a emeela ka ọtụtụ ndị na-azụ ahịa na-eto eto, ọ bụghị naanị ihe okike.
Nke a bụ nkọwa zuru ezu, Kedu Dijitalụ Agbanwewo Ebe Okike.
Tags: aiAmamịghe echicheakpaakaokikedataochichi onye kwuo uche yausoroinfographickeonwenyiwemmemmemgbasa ozi mmemme